Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseSri-Lanka | Iselula Eholelayo | Database lakamuva Lokuposa
Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseSri-Lanka
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseSri-Lanka
Izinombolo Zezingcingo zaseSri-Lanka
Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseSri-Lanka luyithuluzi eliyingqayizivele kuzo zonke izidingo zakho zokuxhumana ngocingo kanye nokuthengisa. Imininingwane yethu yabathengi baseSri-Lanka yaseSri-Lanka iyasiza ekwakheni imithwalo yamathemba ngokuqinisa imikhankaso yakho yokuthumela izingcingo.
Ungayisebenzisa futhi kwezinye izinhloso ze-B2C njengokukhangisa, ucwaningo, ucwaningo nokuningi ngokusebenzisa iziteshi eziningi zokusatshalaliswa. Ungacela ngisho nabathengi 'bezokuzijabulisa' ngale ndlela!
Thenga uhlu lwabathengi bakwaSri-Lanka
Izinombolo Zefoni Zonke: 10,000
Uhlu Lwezingcingo lwabathengi baseSri-Lanka
Ukuhlosiwe okulindelwe kokuhola ngocingo kusuka kuhla lwezinombolo zocingo lwabathengi baseSri-Lanka kuyindlela ebanda kunazo zonke yokuhlunga uhlu lwakho ukukhomba izakhi ezibalulekile ezinamakhasimende akho ahamba phambili bese uhlunga uhlu lwakho ukuze amathemba anezici ezifanayo aphezulu.
Uhlu lwabathengi bezingcingo zabathengi baseSri-Lanka noma uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi olusuka kuDatha Yokugcina Yamahhala liqukethe amarekhodi ayi-10,000 aqoqiwe ohlu lwabathengi lwezinombolo olufika ku- $ 300, okwesikhathi esithile sokukhokha kanye nesoftware engalandelwa engaba yifomethi yefayela le-Excel CSV ongakwazi ngalo khokha ngekhadi eliphakeme, i-paypal, ikhadi lesikweletu, ikhadi le-visa, inyunyana yasentshonalanga nezindlela ezikhokhelayo. Zama ukuvakashela isiza sethu ku-westdwords.com ukuthola eminye imininingwane.
Uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi eSri-Lanka noma uhlu lwezinombolo zeselula lufaneleke kakhulu kunolunye uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi njengoba befaka imininingwane eminingi ngabantu obashayayo futhi banemininingwane yokuxhumana yabantu abasembeni yakho yokumaketha yegama.
I-Sri-Lanka Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo